Amazon Oo Raali Galin Ka Bixisay Been Ay Ka Sheegtay Shaqaalaheega – Heemaal News Network
Shirkadda Amazon ayaa raalligalin ka bixisay been abuur ay hore ugu beenisay in darawallada, mararka qaar, lagu qasbo inay ku kaadiyaan dhalooyinka caagga ah.
Mark Pocan, oo ah Dimuqraadi ka soo jeeda Wisconsin, hore u sheegay in shaqaalahha “loo sameeyey in ay ku kaadiyaan dhalooyinkii biyaha” ayna habkaa ugu talogashay shirkadda Amazon.
Bogga rasmiga ah ee Twitter-ka ee ‘Amazon Twitter’ ayaa markaa ku jawaabay: “Haddii taasi run tahay, qofna inooma uu shaqeeyeen.”
Shirkadda ayaa hadda raaligelin bixisay ka dib markii ay soo baxday caddeymo muujinaya darawallada inay ku kaadiyaan dhalooyinka.
“Waxaan ku leenahay raaligelin Wakiil Pocan,” Amazon ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay.
“Qoraalku wuxuu ahaa mid khaldan. Kama fikirin dadkeenna tirada badan ee darawallada ah taa badalkeedana si qaldan ayaa diiradda loo saaray kaliya xarumaha fulintooda.”
Waxay intaa ku dartay in xarumaha fulinteeda dhammaantood ay leeyihiin daraasiin musqulo ah oo shaqaaluhu isticmaali karaan “wakhti kasta”.
Mr Pocan wuxuu ku dhaleeceeyay shirkadda Amazon inay ka soo horjeesatay dadaallada ay shaqaalaha u galeen inay ku midoobaan xarun weyn oo ku taal Alabama.
“Mushahar siinta shaqaalaha $ 15 / saacaddiiba kaa dhigi mayso ‘goob shaqo oo horumar leh’ marka aad shaqaalahaaga ku kellifto in ay caagado ku kaadshaan “ayuu qoray usbuucii hore.
Wax yar kadib, bogga rasmiga ah ee Amazon ayaa ku jawaabtay: “Runtii ma rumeysatid in lagu saxaroon karo caagad! miyaad rumaysan tahay? Hadday taasi run tahay, qofna nooma shaqeeyeen.”
Dhowr warbaahin ayaa markaa soo xigtay shaqaale fara badan oo Amazon ah kuwaas oo xaqiijiyay in aan fursad kale la siin, oo aan hayn in ay kaadiyaan dhalooyinkaas caagga ah inta ay shaqeynayaan. Waxay sidoo kale ku sheegeen dhaqammo shaqo oo aan kala joogsi lahayn, labadaba xarumaha fulintooda iyo qaybta darwallada alaabta gudbiyaba.
Xogta ayaa sidoo kale lagu sheegay inay heshay dukumiinti gudaha ah oo tilmaamaya in madaxda Amazon ay ka warqabaan waxa dhacaya.
Amazon ayaa qoraalka ka soo baxay ku sii sheegtay: “Waan ognahay in darawallada ay dhib kala kulmi karaan musqulaha, sababtoo waddooyinka jaamka ah ama mararka qaarkood jidadka miyiga, tanina waxay si gaar ah u dhacday xilligii Covid markii musqulo badan oo dadweynaha la xidhay.”
Waxay raaciyeen in dhibaatadu ay ahayd “arrin soo jireen ah, oo ku saabsan warshadaha oo dhan” waxayna sheegtay “inay jeclaan lahaayeen inay xalliyaan”.
Mr Pocan ayaa diiday raaligelinta sabtidii, isaga oo bartiisa Twitter-ka ku qoray: “Taah. Tani aniga ma aha, ee waxay ku saabsan tahay shaqaalahaaga – kuwaas oo aanad kula dhaqmin ixtiraam iyo sharaf kugu filan. Ka bilow inaad qirato xaaladaha shaqo ee aan geyin ee aad u abuurtay dhamaan shaqaalahaaga, markaa taas u hagaaji qof walba, ugu dambeyntiina, ha u midoobaan faragelin la’aan. ”
Shaqaalaha Amazon ee Bessemer, Alabama, waxay u codeeyeen codbixin taariikhi ah usbuucii la soo dhaafay si ay u go’aamiyaan haddii ay doonayaan inay matalaan Retail, Wholesale iyo Department Store Union. Dadaalkaas waxaa si adag uga horyimid shirkadda Amazon.
Natiijooyinka lama filayo ilaa todobaadka dambe. Haddii ay haa u codeeyaan, waxay noqoneysaa midowgii ugu horreeyay ee Mareykanka ee Amazon.
Amazon waxay si guul leh ula dagaallantay dadaallada midowga meelo kale oo Mareykanka ah. Si kastaba ha noqotee, inta badan xarumaheeda Yurub waa kuwo midaysan.
Dani Oo Ku Baaqay In Loo Midoobo Dagaalka Alshabaab
Beesha Faqashini Oo Dalbatay In la Helo Kursigii ay ku Lahaayeen Aqalka Sare.
Heemaall July 16, 2021
Booliska Boosaaso Oo soo Qab-qabtay Dad Cunto ka Ganacsanayay Bisha Ramadaan.
Heemaall April 25, 2021
Khilaaf ka Dhex-qarxay Madaxweynaha Galmudug Iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka.